Manangona Vaovao Mikasika Ny Firenena Ho Aminà Toerana Iray Ireo Rindrambaiko Zambiana Ho an’ny Finday · Global Voices teny Malagasy
Manangona Vaovao Mikasika Ny Firenena Ho Aminà Toerana Iray Ireo Rindrambaiko Zambiana Ho an'ny Finday	Voadika ny 23 Novambra 2012 9:20 GMT
Zarao: Taorian'ny fanamboarana rindrambaiko ho anà finday Android tamin'ity taona izay manome fahafahana ireo Zambiana handray anjara anatin'ny dingan'ny fanoratana ny lalàm-panorenana, nisy rindrambaiko roa hafa ihany koa, ny Zambia News Daily sy ny The Zambian izay manangona ireo vaovao momba ny firenena avy amin'ireo loharano maro ao anaty aterineto, nipoitra teny amin'ny tsena.
Toy izao ny famintinana ny Zambia News Daily ao amin'ny vohikalan'ny Google Play:
Ry Mpamaky ny Zambia News hajaina! Fantatray ny lanjan'izany fahazoana ireo VAOVAO FARANY mikasika ny firenena izany. Ary tianay ho ianao no voalohany indrindra hahafantatra ireny vaovao ireny. Izany no nahatonga ny ekipanay namorona ity fitaovana ity ho anao manokana.
Nefa tsy izay ihany. Raha ohatra ka sendra mpizahatany ianao izay te-hahafantatra bebe kokoa mikasika ny firenen'i Zambia, na mponina ao an-toerana fa te-hahita sarin'ilay firenena dia afaka hijery ny SARIN'i Zambia ianao avy amin'ny alalan'ny fampiasàna ity rindrambaiko ity ihany.
sarin'ny Zambia News Daily aminà smartphone mampiseho iray amin'ireo tantara nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Global Voices.
Noho izany nahoana ny hampiasa ireo loharanom-baovao maro raha afaka manangona ireo fampahalalana rehetra ilainao ianao miaraka amin'ity rindrambaiko ity? Raha ohatra ka misy antony tsy itiavanao ity rindrambaiko ity, dia afaka manala izany ianao. Raha ohatra kosa ka tianao izany – dia ankafizo fotsiny ihany ary mahazoa fotoana mamy miaraka aminy!
Novolavolain'ny Rangerapps ity rindrambaiko ity, izay namolavola rindrambaiko sahala amin'izany ihany koa ho an'ireo firenena maro tahaka an'i Nizeria, Ganà sy ireo hafa.
The Zambian, mbola ao anatin'ny Google Play ihany koa, mamaritra ny tenany amin'ny alalan'ireo teny manaraka ireto:
Mandrakotra ireo vaovao farany avy ao Zambia ny “The Zambian”. Afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo vaovao Zambiana ianao eny am-pandehanana eny miaraka amin'ny rindrambaiko novokarinay ho an'ny finday. Ny tanjonay dia ny hahatokana azy hany ilainao raha resaka rindrambaikonay ao Zambia […]
Miaraka amin'ireo rindrambaiko vaovao ireo ao amin'ny findainy, tsy hila hitsidika ireo vohikala vaovao maro ao anaty aterineto intsony ireo mpampiasa aterineto vao hahazo vaovao mikasika an'i Zambia.
Tantaran'ny Mediam-bahoaka farany 6 ora izayAmerika LatinaFotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin'ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany
10 ora izayAfrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaMitondra Fanantenana Sy Fanasitranana Any Palestina Ny ‘Faribohitra Miloko Marevaka’ Ao Gaza
10 ora izayEoropa Afovoany & AtsinananaIndizena Mpiompy Diera, Tezitra Amin'ny Goavan'ny Solika Ao Siberia
Jentilisa Momba ny mpandray anjara »	Rehefa App ny resaka dia fampiasa na fampiharana no tsara iantsoana azy kokoa
16 Febroary 2013, 02:39	Raha hamaly ity hevitra ity Ajanony ihany